जसले विदेशको जागिर छाडेर गोठालो पेसा रोजे, कति हुन्छ कमाइ ? « Salleri Khabar
जसले विदेशको जागिर छाडेर गोठालो पेसा रोजे, कति हुन्छ कमाइ ?
११ भदाै, म्याग्दी । रघुगङ्गा गाउँपालिका ८ पात्लेखर्कस्थित छिसखर्कको भेडीगोठमा व्यस्त रहेका मिलन छन्त्याल ४५ वर्षका भए । युवा अवस्थाको करिब १५ वर्ष प्रवासमा जीवन बिताएका छन्त्याल विगत पाँच वर्षदेखि गाउँका पाखापखेरा र वनजङ्गलतिर भेडीगोठमा व्यस्त छन् । युवा अवस्थाको प्रवासी समय मलेसियाका ठूला सहरमा बिताएका छन्त्यालले आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउँदै कठिन र सङ्घर्षयुक्त पेसा भए पनि आफ्नै जन्मथलोको सम्भावनालाई सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।
पाँच वर्षदेखि भेडापालन गर्दै आउनुभएका उहाँले वनजङ्गलमा घुम्ती गोठ राख्दै आएका छन् । भेडापालनबाट सन्तोषजनक आम्दानी हुने बताउने उनले उत्पादन भएका भेडाबाख्राका लागि बजारको अभाव नभएको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार, भेडा, खसी, साँढे, बोका खरिदका लागि ग्राहक गोठमा नै पुग्ने गरेका छन् । प्रवासबाट गाउँ फर्किएपछि गोठालो दैनिकीमा पस्नुभएका छन्त्यालले आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बन्न पाउँदा खुसीको महसुस हुने गरेको बताए ।
पात्लेखर्ककै दानबहादुर गर्वुजाले पनि प्रवासमा आर्जन गरेको कमाईलाई गाउँमै भेडापालनमा लगानी गरेका छन् । रोजगारको सिलसिलामा आठ वर्षसम्म इराक बसेर फर्केका गर्बुजाले रु १३ लाखको लगानीबाट भेडापालन व्यवसाय सुरु गरेका थिए । भेडापालन थालेको पाँच वर्षमा उनको गोठमा भेडाको सङ्ख्या २५० नाघेको छ । हरेक वर्ष आठदेखि १० लाखसम्मका भेडा गोठबाट बिक्री हुँदै आएका छन् । एक सयको हाराहारीमा वार्षिकरुपमा भेडा गोठमा थपिन्छन् ।
“स्वदेश फर्किएपछि आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बन्न अभिप्रायले भेडापालन थालेको हुँ, अनकन्टार जङ्गल र हिमालका काखसम्म गोठ लैजाने गर्छौं, सोचेजस्तो सजिलो त छैन भेडीगोठ तर आफ्नै ठाउँमा आत्मनिर्भर बन्ने र रोजगारसमेत सिर्जना हुने पेसा अगाल्न पाएकामा सन्तुष्ट छु”, गर्बुजाले भने ।
यस्तै भिन्न जीवनशैलीमा घुलमिल भएको छ, ४२ वर्षीय जगत पुनको दैनिकी पनि । रघुगङ्गा गाउँपालिका ७ चिमखोलाका पुनले पनि विदेशको हण्डर खाएपछि गोठाला जीवन सुरु गरेका हुन् । मलेसिया र कतारको आठ वर्ष लामो वैदेशिक रोजगारबाट रित्तो हात घर फर्केका पुनले आफ्ना दाजुको सहयोगमा ३० वटा भेडा खरिद गरेर भेडापालन थालेका थिए । “अरुको देशमा धेरै पसिना बगाए, भनेजस्तो कमाइ भएन, घर फर्कंदा मसँग केही थिएन, आफ्नो पाखाबारीमा पसिना बगाउने निधो गरी रित्तो हात नै आएको हुँ, अहिले मसँगै १७० वटा भेडा छन्, विदेशको हण्डरभन्दा यहाँ जङ्गल र भिर पहाडमा घुम्ती गोठको सङ्घर्षमा आनन्दित छु”, पुनले भने । उनले अहिले भेडापालनबाटै परिवारको जीविकोपार्जन गर्छन् ।
‘‘सहरको जस्तो सुखसयल त यहाँ छैन, तर आफ्नै ठाउँमा ढिँडो र फाँडो खान किन नपरोस्, खुला आकासमुनि बस्न किन नपरोस्, विदेशमाभन्दा यही नै खुसी छु, पौरखका लागि पसिना बगाएको छु”, उनले भने । पुनका बाजेको पुस्ताले पनि भेडापालन गरेका थिए । बुबाको पालामा छाडेको भेडापालनलाई पुनःसुरु गरेका पुनलाई उनका घरपरिवारले राम्रो साथ र सहयोग दिएका छन् । छोराछोरी र श्रीमतीले गोठमा आलोपालो गरेरै भए पनि एक्लो हुन नदिएको पुनको भनाइ छ । गर्मी याममा हिमालको फेदीसम्म पुराउने भेडागोठ हिउँदमा बेँसीका फाँटसम्म झार्ने गरिन्छ । म्याग्दीको उच्च हिमाली भेग भेडापालनका लागि सम्भावनायुक्त छन् ।
गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै भेडापालन गर्ने कृषकलाई समेटेर समूह गठन गरी गोठ सुधार, गोठका लागि शौचालय निर्माण, उन काट्ने र खसी बनाउने उपकरणमा सहयोग गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल सरकारमार्फत प्राप्त सशर्त अनुदान रु १० लाख, गाउँपालिकाको रु चार लाख र समूहमा आबद्ध कृषकको चार लाख ६६ हजार लगानीमा भेडापालन प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिएको हो ।